Fitaovana fanaraha-maso marika 10 izay azonao atombohana maimaim-poana | Martech Zone
Ny marketing dia sehatry ny fahalalàna ka indraindray mety hahagaga. Mahatsiaro tena ho toy ny hoe mila manao zavatra mahatsikaiky ianao indray mandeha: mieritrereta amin'ny alàlan'ny paikadim-barotrao, manaova votoaty, araho maso ny SEO sy ny varotra media sosialy ary maro hafa.
Soa ihany fa misy hatrany ny martech manampy antsika. Fitaovana marketing afaka manala enta-mavesatra amin'ny sorontsika ary mandeha ho azy ireo ampahany mahasarika na tsy mahaliana amin'ny marketing. Ankoatr'izay, indraindray izy ireo dia afaka manome antsika fahitana izay tsy azontsika atao amin'ny fomba hafa - toy ny fanaraha-maso ny marika.
Inona no atao hoe fanaraha-maso ny marika?
Fanaraha-maso ny marika dia ny fizotry ny fanarahana ny resaka mifandraika amin'ireo marikao an-tserasera: amin'ny media sosialy, forum, forum mpanangona, tranokala sns. Ny fantsona an-tserasera sasany, toy ny ankamaroan'ny sehatra media sosialy, ohatra, dia mamela ny mpampiasa hanisy marika ny marika hanintona ny sain'izy ireo. Saingy na dia ireo voalaza voamarika ity aza dia mety tsy ho hadinonao amin'ny tabataban'ny media sosialy.
Miaraka amin'ny isan'ny fantsona an-tserasera ananantsika, tsy hain'ny olombelona ny manara-maso ny zava-drehetra amin'ny tanana. Ny fitaovana fanaraha-maso marika dia manampy anao hanara-maso ny hetsika an-tserasera ataon'ny orinasan'ny orinasa, hanaraha-maso ny lazanao, hitsikilo ireo mpifaninana aminao sns.
Maninona ianao no mila fanaraha-maso marika?
Saingy tena mila manara-maso izay lazain'ny hafa momba ny marikao amin'ny Internet ve ianao? Mazava ho azy fa manao ianao!
Ny fanaraha-maso ny marikao dia ahafahanao:
Azavao tsara ny mpihaino kendrenao: azonao atao ny mamantatra hoe inona ny sehatra media sosialy sy tranokala ampiasainy, inona ny fiteny ampiasainy, ny toerana onenany, sns.
Fantaro ny tanjaky ny marika sy ny fahalemeny. Rehefa manao fanaraha-maso ny marika ianao dia afaka mahita ny tarainan'ny mpanjifa sy ny fangatahany ary mamantatra ny fomba hanatsarana ny vokatrao.
Arovy ny lazan'ny marika manohitra krizy PR. Rehefa mahita haingana ny teny ratsy momba ny marika ianao dia afaka miatrika azy ireo eo noho eo alohan'ny hivadihan'izy ireo amin'ny krizy media sosialy.
Mitadiava fotoana mety amin'ny marketing: mitadiava sehatra vaovao, fahafaha manao backlink ary vondrom-piarahamonina hivarotana.
Mitadiava influencer izay te hiara-hiasa aminao.
Ary vao fanombohana ihany izany. Fitaovana fanaraha-maso ny marika dia afaka manao izany rehetra izany sy ny maro hafa - mila misafidy ny tsara ho an'ny orinasanao ianao.
Miovaova arakaraka ny fahaizany ny fitaovana fanaraha-maso marika, ny sasany mifantoka amin'ny fanadihadiana bebe kokoa, ny sasany manambatra ny fanaraha-maso amin'ny fiasa mandefa sy ny fandaharam-potoana, ny sasany mifantoka amin'ny sehatra manokana. Amin'ity lisitra ity dia nanangona fitaovana marobe aho raha te hanana tanjona sy teti-bola. Manantena aho fa ho hitanao ilay mifanaraka aminy.
Ny fitaovana fanaraha-maso marika rehetra amin'ity lisitra ity dia maimaim-poana na manolotra fitsarana maimaimpoana.
Awario dia fitaovana fihainoana ara-tsosialy izay afaka manara-maso ny teny lakileo (ao anatin'izany ny anaranao) amin'ny fotoana tena izy. Safidy dia safidy mety indrindra ho an'ireo orinasa kely sy salantsalany ary masoivohon'ny varotra: manome analytics mahery amin'ny vidiny mirary izy.
Izy io dia mahita ny voalaza rehetra momba ny marikao amin'ny media sosialy, any amin'ny haino aman-jery, bilaogy, forum, ary tranonkala. Misy karazana sivana be pitsiny izay ahafahanao manao ny fanaraha-maso anao ho marina kokoa sy a Fomba fikarohana Boolean hanampy anao hamorona fangatahana tena manokana. Izy io dia afaka manampy raha anarana marika mahazatra ihany koa ny anaranao (mieritreritra Apple).
Miaraka amin'i Awario dia mahazo miditra amin'ireo voalaza ao amin'ny Internet sy amin'ny famakafakana momba ireo voalaza ireo ianao. Ny fitaovana dia manome anao angon-drakitra demografika sy fitondran-tena momba ireo olona miresaka momba ny marikao, mamela anao hampitaha ny marikao amin'ny mpifaninana aminao ary manolotra tatitra misimisy momba ny Influencers miresaka ny marikao.
Azonao atao ny manangana an'i Awario handefa anao fampandrenesana amin'ny fanonona vaovao amin'ny alàlan'ny mailaka, Slack, na fampandrenesana fanosehana.
Vidiny: $ 29-299 rehefa ampandoavina isam-bolana; Ny drafitra isan-taona dia mahavonjy anao 2 volana.
Fitsarana maimaimpoana: 7 andro ho an'ny drafitra Starter.
Social Searcher dia safidy tsara ho an'ireo izay liana indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fitanisan'ny tsirairay. Sehatra tranokala mora ampiasaina ity izay manome anao ny mombamomba ny marikao avy amina loharano marobe ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, Reddit, YouTube ary maro hafa.
Ny tombony voalohany amin'ny Social Searcher dia ny famolavolana intuitive - rehefa mankany amin'ny tranokala ofisialy ianao dia mangataka anao hametraka ny teny lakileo ary manomboka manara-maso. Tsy mila misoratra anarana amin'ny mailaka akory ianao. Ny mpikaroka ara-tsosialy dia mitaky fotoana kely hahitana voalaza ary avy eo dia mampiseho aminao ny fahana feno fanonona avy amin'ny loharano samihafa. Azonao atao ihany koa ny manindry ny kiheba analytics mba hahitanao ny fihenan'ny fitanisana avy amin'ny loharanom-baovao, tamin'ny fotoana nananganana azy ireo, ary tamin'ny fihetseham-po.
Safidy lehibe ny Social Searcher raha te hijery haingana ireo teny lakile amin'ny Internet ianao. Raha te hanana fizotran'ny fanaraha-maso marika ianao, angamba mijery fitaovana hafa miaraka amin'ny UI mety kokoa.
Vidiny: maimaim-poana, saingy afaka mandoa drafitra ianao (manomboka amin'ny € 3., 49 ka hatramin'ny € 19.49 isam-bolana) hananganana fanairana mailaka sy fanaraha-maso tsy tapaka.
Fitsarana maimaim-poana: maimaim-poana ny fitaovana.
Mentionlytics dia fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy izay manolotra fanaraha-maso ny marika miaraka amin'ny fiasa famoahana. Ary mahavita tsara manao ireo zavatra roa ireo.
Io dia ahafahana mitsambikina anaty resaka hitany amin'ny fotoana tena izy ary mifanerasera amin'ireo mpampiasa media sosialy. Izy io dia afaka manara-maso ny marikao na amin'ny media sosialy na amin'ny Internet na amin'ny fiteny 20 mahery.
Ny mampiavaka an'i Mentionlytics dia ny Mpanolotsaina ara-tsosialy. Serivisy AI izy io izay ahazoana hevi-baovao azo ampiharina avy amin'ny angona sosialy. Ohatra, raha manara-maso ny marikao ianao dia afaka mahita ny teboka mararin'ny mpanjifanao ary manasongadina azy ireo aminao.
Ho fanampin'izay, Mentionlytics dia manolotra analytics momba ny fanatrarana sy ny fitaoman'ireo voalaza voalaza, fanaraha-maso ny mpifaninana ary fomba fikarohana Boolean.
Vidiny: manomboka amin'ny $ 39 ka hatramin'ny $ 299 isam-bolana.
Fitsapana maimaim-poana: manolotra fitsapana maimaimpoana 14 andro ilay fitaovana.
TweetDeck fitaovana ofisialy avy amin'ny Twitter hanampy anao hitantana azy amin'ny fomba mandaitra kokoa. Ny dashboard dia voalamina ao anaty renirano mba hahafahanao manaraka ny fahana, fampandrenesana ary ny firesahana kaonty maromaro indray mandeha.
Mikasika ny fanaraha-maso ny marika, azonao atao ny manangana renirano "Seach" izay hanatitra ny voalaza rehetra momba ny teny lakile (anaranao na ny pejin-tranonkalanao) amin'ny dashboard anao. Mampiasa lozika mitovy amin'ny Advanced Search ao amin'ny Twitter izy io hahafahanao misafidy ny toerana, ny mpanoratra ary ny isan'ny engagement ho an'ny toe-javatra fanaraha-maso ny marika.
Ny tombony lehibe amin'ny Tweetdeck dia ny fahamendrehana: satria vokatra ofisialy Twitter izy io, azonao antoka fa mahita ny voalaza REHETRA azo atao izy ary tsy hanana olana mifandray amin'ny Twitter mihitsy.
Ny lafy ratsy dia ny fifantohana amin'ny sehatra iray ihany. Raha manana fisian'ny Twitter efa niorenany ny marikao ary mila vahaolana maimaim-poana hanaraha-maso azy, safidy mety tsara ny Tweetdeck.
Mety ho gaga ianao mahita SEMrush amin'ity lisitra ity - rehefa dinihina tokoa, dia fitaovana SEO indrindra no tena fantatra. Na izany aza, manana fahaiza-manao fanaraha-maso matanjaka izy, voalohany indrindra, mifantoka amin'ny tranokala mazava ho azy.
Ny fitaovana dia manolotra fahana ara-pahalalana azo lazaina momba ny hevitra ahafahanao miasa miaraka amin'ireo lahatsoratra sy pejy tsirairay, hametahana anarana ary hanisy marika azy ireo ary hanivana ny valiny ho an'ny sary iray marina kokoa. Miaraka amin'ireo tranonkala, SEMrush koa dia manara-maso ny Twitter sy Instagram.
Satria i SEMrush dia miorina amin'ny tranokala, manome ny mpampiasa fahaizana hanara-maso sehatra manokana izany. Mety hahasoa indrindra amin'ny fanaraha-maso ny haino aman-jery mifandraika amin'ny indostria na tranokala famerenana manokana izay resahina indrindra ny marikao.
Ankoatr'izay, SEMrush dia fitaovana tsy fahita firy afaka mandrefy ny fifamoivoizana avy amin'ny firesahana an-tserasera izay misy rohy - ny fampidirana azy amin'ny Google Analytics dia ahafahanao manara-maso ny tsindry rehetra ao amin'ny tranonkalanao.
Vidiny: ny fanaraha-maso ny marika dia tafiditra ao amin'ny Plan Guru izay mitentina $ 199 isam-bolana.
Fitsarana maimaim-poana: misy andrana maimaimpoana 7 andro.
filazana dia orinasa frantsay iray izay manokana amin'ny fanaraha-maso sy fihainoana resaka an-tserasera. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo orinasa antonony sy marika haavo Enterprise satria manolotra analytics sy fampidirana maro hafa amin'ny fitaovana hafa ho an'ny fanaraha-maso marika matanjaka.
Manome lanja betsaka ny fikarohana amin'ny fotoana tena izy - tsy toy ny fitaovana hafa ato amin'ity lisitra ity (Awario, Brandwatch) fa ny angon-drakitra ara-tantara ihany no atolotray (izany hoe ny fiantsoana izay antitra mihoatra ny herinandro) ho fanampiana. Misintona angona avy amin'ny Facebook, Instagram, Twitter, forum, bilaogy, horonan-tsary, vaovao, tranonkala, ary koa radio & TV mba hahazoana antoka fa mijanona amin'ny fahalalana ny resaka rehetra mitranga manodidina ny marikao ianao.
Ny fitaovana fanaraha-maso ny marika dia manome dashboard an-tsipiriany amin'ny an-tsipiriany miaraka amin'ny metrika isan-karazany ao anatin'izany ny miralenta, ny fahatsapana ny fahatsapana, ny fanatrarana sns. Izy io koa dia manana fampidirana API izay ahafahanao manangana ny fanadihadian'izy ireo amin'ny fitaovana na tranokalanao manokana.
Vidiny: maimaim-poana hatramin'ny 1,000 ny fitaovana. Manomboka eo dia manomboka amin'ny $ 25 isam-bolana ny vidiny.
Fitsarana maimaimpoana: manolotra fanandramana maimaimpoana mandritra ny 14 andro ho an'ny drafi-karama i Mention.
Buzzsumo dia fitaovana marketing amin'ny atiny ka ny fahaizany manara-maso ny marika dia mety hahaliana manokana an'ireo marika izay manao laharam-pahamehana ny atiny.
Ny fitaovana dia ahafahanao manara-maso ny atiny rehetra manonona ny marikao ary manadihady ny firosoana manodidina ny atiny tsirairay. Manome anao ny isan'ny fizarana amin'ny media sosialy, isan'ny tiany, fomba fijery ary tsindrio izany. Izy io koa dia mampiseho ny statistika ankapobeny amin'ny fikarohana nataonao.
Amin'ny alàlan'ny fananganana fampandrenesana dia azonao atao ny manohy ny fanavaozana ny lahatsoratra sy ny bilaogy vaovao miresaka ny marikao. Azonao atao ny mamorona fampandrenesana hanarahana marika momba ny marika, voalaza momba ny mpifaninana, atiny avy amin'ny tranokala, teny fanalahidy, backlinks, na mpanoratra iray.
Vidiny: manomboka amin'ny $ 99 ny vidiny.
Fitsarana maimaimpoana: misy fitsarana 30 andro maimaim-poana.
Talkwalker manana anarana ao amin'ny vondrom-piarahamonina media sosialy - dia heverina ho iray amin'ireo fitaovana fihainoana sy fanaraha-maso sosialy lehibe izy io. Ary rariny izany!
Izy io dia fitaovana haavo Enterprise ho an'ny ekipa marketing lehibe misy dashboard analytics maro sy fahitana mifototra amin'ny AI. Talkwalker dia mandefa angona amin'ny fotoana tena izy fa manangona sy mamakafaka ireo fanamarihana marika miverina hatramin'ny roa taona ihany koa. Zavatra iray tsy mitovy amin'ny Talkwalker amin'ireo mpifaninana aminy dia ny fanekena ny maso: ny fitaovana dia afaka mahita ny sary famantaranao amin'ny sary sy amin'ny horonan-tsary manerana ny Internet.
Talkwalker dia manome loharanom-baovao avy amin'ny tambajotran-tserasera 10 miampy ny tsy mazava kokoa toa ny vaovao Webo sy TV sy radio.
Vidiny: $ 9,600 XNUMX + / taona.
Fitsarana maimaimpoana: tsy misy fitsarana maimaimpoana, fa misy kosa ny demo maimaim-poana.
Vahaolana fanaraha-maso marika haavo Enterprise hafa ihany koa Meltwater. Sehatra haino aman-jery sosialy sy sehatra ara-barotra izay miankina betsaka amin'i AI mba hanome fomba fijery azo tanterahina.
Mijery mihoatra ny media sosialy fotsiny izy io, mandinika lahatsoratra an-tapitrisany isan'andro avy amin'ny sehatra media sosialy, bilaogy ary tranokalam-baovao. Izy io dia manivana ny firesahana tsy misy ifandraisany ary manome ny fihetseham-po amin'ireo teny mahaliana anao
Meltwater dia ahitana dashboard maro izay manara-maso, mamaritra, ary mamakafaka ny hetsika an-tserasera. Azonao atao ihany koa ny mamolavola dashboard namboarina mba hanomezana fahafaham-po kokoa ny filanao.
Vidiny: $ 4,000 XNUMX + / taona.
Fitsarana maimaimpoana: tsy misy fitsarana maimaimpoana, fa afaka mangataka fampisehoana maimaimpoana ianao.
NetBase Solutions dia sehatra fitadiavam-bola amin'ny varotra goavambe izay misy ihany koa ny faharanitan-tsaina amin'ny fifaninanana, ny fitantanana ny krizy, ny fizahana teknolojia ary ny vahaolana hafa.
Io fitaovana fanaraha-maso marika io dia mandroso - ahafahanao manara-maso ny marikao amin'ny haino aman-jery sosialy, tranokala ary fantsom-baovao mahazatra; fantaro ireo anton-javatra manan-danja izay mitaona ny filan'ny marika amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fahatsapana ary mampifandray ireo data rehetra ireo amin'ny KPI orinasao.
Ho fanampin'ny angona azo avy amin'ny media sosialy, dia mampiasa loharano hafa toy ny fanadihadiana, vondrona ifantohana, naoty, ary ny fanamarihana, hahitana araka izay azo atao momba ny marikao.
Vidiny: NetBase dia tsy manome fampahalalana momba ny vidiny, izay mahazatra amin'ny fitaovana avo lenta Enterprise. Afaka mahazo vidiny manokana ianao amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'ny ekipa fivarotana.
Fitsapana maimaim-poana: afaka mangataka demo maimaimpoana ianao.
Inona ny tanjonao?
Ilaina amin'ny orinasa rehetra ny fanaraha-maso ny marika, fa miankina aminao izay fitaovana hampiasainao. Jereo ny teti-bolanao, ireo lampihazo tianao hotratrarina sy ny tanjonao.
Te hifantoka amin'ny resaka tsirairay ve ianao mba hikarakarana ny fangatahan'ny mpanjifa sy hampitomboana ny fifamatorana? Sa mety te handinika ny mpihaino kendrenao ianao hanatsarana ny paikady ara-barotra? Sa liana amin'ny valiny avy amin'ny tranokala manokana na mpanangom-baovao?
Misy fitaovana iray amin'ny filàna sy teti-bola rehetra ary ny ankamaroan'izy ireo dia manolotra kinova maimaimpoana na fanandramana maimaimpoana ka mamporisika anao aho hahita ilay mifanaraka amin'ny filanao ary andramo!
Disclaimer: Martech Zone dia mampiasa ny rohin'izy ireo SEMrush ambony.
Tags: awariofanaraha-maso ny marikamarika malaza fitaovanabuzzsumorano mitsonikamanononamentionlyticfitaovana fanaraha-masonetbasesemrushfihainoana ara-tsosialympikaroka ara-tsosialytalkwalkerTweetDeck
Fitaovana fanatsarana App Store 10 ambony hanatsarana ny filaharana amin'ny laharana fampiharana malaza
Ahoana ny fomba hanatsarana ny lohateninao (Miaraka ohatra)